Jese (rain'i Davida) - Wikipedia
Jese (rain'i Davida)
I Jese dia lehilahy voalaza ao amin'ny Baiboly fa rain'ny mpajaka Davida. Atao hoe יִשַׁי / Ishai ny anarany amin'ny teny hebreo. I Jese dia zanaka lahin'i Obeda zanak'i Boaza sy i Rota vehivavy moabita. Ao Betlehema no fonenany izay niompiany ondry maro. Nanan-janaka valo izy ka ny fito no fantatra anarana, araka ny Bokin'ny Tantara, dia i Eliaba, i Abinadaba, i Hama, i Natanaela, i Raday, i Ozema ary i Davida.
Nasain'ny mpaminany Samoela mba hizara ny henan'ny ondry nataony fanatitra tamin'Andriamanitra i Jese. Nandalo teo anatrehan'ny mpaminany ny zanaka lahin'i Jese mandra-pahitany izay hotondroiny ho mpanjaka ka hanosorany izany, ka i Davida ilay faralahy no voafidin'Andriamanitra.
Taty aoriana dia naniraka an'i Davida hitondra sakafo ho an'ireo rahalahiny isan'ny miaramilan'i Saoly miady amin'ny Filistina i Jese. Tamin'izany no nahatanteraka no namonoan'i Davida an'ilay Filistina goavambe atao hoe Goliata.
Napetrak'i Davida tany amin'ny mpanjakan'i Moaba vonjimaika ny ray aman-dreniny taty aoriana. Isan'ny olona lava andro iainana indrindra tamin'ny androny i Jese, nefa mety tsy nahita ny naha mpanjaka an'i Davida.
Ny firesahan'ny Baiboly taty aoriana ny anaran'i Jese dia miaraka foana amin'ny anaran'i Davida zanany. Izany no ahitana ny anarany ao amin'ny faminanian'i Isaia (na Izaia) manambara ny fiavian'ny Mesia, manao hoe: "
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jese_(rain%27i_Davida)&oldid=974579"
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2019 amin'ny 19:44 ity pejy ity.